Tany lasan` ny vahiny Mila fitsarana mangarahara
Sehatra iray ahitana olana ara-pitsarana indrindra ny resaka fananan-tany eto Madagasikara. Fanamafisana ny ezaka fiarovana izay ny fizarana taratasy fananan-tany mihoatra ny 200.000 manerana ny nosy amin`ity taona ity, hoy ny praiminisitra Ntsay Christian.
Sehatra iray lehibe hanampiana ny mponina, indrindra ny any ambanivohitra ny fiarovana azy ireo amin`ny fananan-tany. Izany ve afaka hiaro ny Malagasy amin`ny vahiny ? Tsy misy maharatsy azy ny tetikasa saingy kosa mitaky lamina maty paika sy mazava ary mangarahara. Tena miharihary fa amidy atao varo-boba i Madagasikara. Tena efa ho lava ny fahenoana saika ho isan’andro lava izao fa misy trano arodana atsy, misy kianja fefena aroa, satria lasan’ny vahiny ny tany. Firy ny raharaha fananan-tany dinihana eny amin`ny Fitsarana ? Vitsy ny Malagasy mahazo rariny manoloana ny vahiny. Sao sanatria hanao izay hahazoan’ny vahiny tombontsoa fotsiny dia avy eo hiala andraikitra rehefa tena very tanteraka ny firenena.